N'ikpeazụ, afụ Nintendo afụ ọnụ ma daa site 18% na ngwaahịa ahịa | Akụkọ akụrụngwa
N'ikpeazụ, a na-agbaji afụ Nintendo ma ọ daa 18% na ahịa ahịa
Ihe ọ bụla na-arị elu ngwa ngwa na-agbadata. Ihe Pokémon bu ihe tochiri uwa dum, aghọwo otu n'ime ngwa kachasị baa uru maka okike iOS na gam akporo ebe ọ dị naanị. Site na ndagwurugwu, Pokémon GO emeela ka ọnụ ahịa Nintendo rịa elu n'izu mbụ nke ịkụ ahịa. Ma ka ụbọchị na-aga, uru nke mbak agaa n'ihu ịrị elu ruo mgbe ọ karịrị Sony pụrụ ime ihe nile, ihe dị ole na ole buru amụma.
Aghọtabeghị m mkpali ndị raara onwe ha nye n'ịzụ Nintendo mbak hụrụ mgbe mwepụta nke egwuregwu a, mgbe Nintendo adịghị n’azụ Pokémon GO mana ụlọ ọrụ mepụtara ya site na ịkwụ ụgwọ ikikere kwekọrọ na ụlọ ọrụ Japan.
Niantic bụ ụlọ ọrụ na-akwado usoro mmepe ngwa niile yana onye na enweta ọtụtụ uru mgbe a tọhapụrụ egwuregwu ndị a. A na-ekesa uru ndị a dị ka ndị a: 30% maka ụlọ ahịa ngwa na-ekesa ya, 30% maka Niantic, 30% maka Companylọ ọrụ Pokémon na 10% maka Nintendo.
Mana n'agbanyeghị ihe ọtụtụ mmadụ chere, Nintendo nwere 32% nke Plọ ọrụ Pokémon, ọ bụghị 100% dị ka ndị ọzọ kwuru. N'ihi ya, ozugbo Nintendo zigaara ndị na-etinye ego akwụkwọ ozi na-akọwapụta okwu a, mbak ụlọ ọrụ adaala 18% n'ime awa ole na ole, ọ bụ ezie na ha ka dị elu karịa uru ha nwere tupu ịmalite egwuregwu a na Niantic na Thelọ ọrụ Pokémon. Anyị ga-echere ruo echi iji hụ ma ụlọ ọrụ Japan ọ ga-aga n'ihu na-ada n'ahịa ahịa ruo mgbe ọ ruru ụkpụrụ mbụ ma ọ bụ na ọ ga-anọgide, mana ihe niile na-egosi na ọ gaghị.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » N'ikpeazụ, a na-agbaji afụ Nintendo ma ọ daa 18% na ahịa ahịa
Akwụkwọ Xiaomi Mi Notebook, laptọọpụ Xiaomi ga-eweta na July 27